Qandaraaska Mashruuca Sapanca Teleferic, oo ah kii ugu horreeyay noociisa ee Sakarya, ayaa la qabtay. Mashruuca, oo siin doona dhiirigelin cusub dalxiiska Sapanca, ayaa la qorsheeyay in lagu dhammeeyo bilaha 18. Gudoomiyaha Komishanka Qandaraaska Sapanca Duqa [More ...]
Dowlada hoose ee Sapanca, Kırkpınar Quarter iyo Mahmudiye Incebel Mesele ee kuyaala xaafada ayaa ka shaqeyn doona inta udhaxeysa qandaraaska gaariga fiilada. Sida ku xusan ogeysiiska mawduuca rasmiga ah ee Gazette rasmiga ah, baabuurta ballanqaadayaasha iyo gawaarida fiilada [More ...]
Teleferik iyo Soakucak Plateau
Gudoomiyaha Xisbiga Dadka Jamhuuriga Cengiz Cicek wuxuu sheegay in mashruuca gawaarida fiilada ee ay ka bilaabanayso degmada ay tahay in la balaariyo isla markaana Sogucak Plateau lagu daro mashruucan. Soğucak Plateau ayaa ugu badan [More ...]
Daadadka iyo Sapanca Rugaha Tareenka Xawaaraha Sare
Oya Arapoğlu, Sakarya Wakiilka Rugta Qorsheyaasha Magaalada, ayaa soo jiitay daadadka biyaha ee dhacay ka dib roobkii ba'ay ee usbuucii la soo dhaafay. Arapoglu wuxuu yidhi, “Tani waxay na siineysaa xuquuqda maalgashiga dadweynaha. [More ...]
Socdaalka Ada Express wuxuu ku bilowday joogsi cusub
Adapazarı Express ma aha tirada safarada, laakiin tirada joogsiga ayaa hadda la kordhiyay. Sanadihii la soo dhaafay, tareenka shaqaalaha magaalada, oo ah habka gaadiidka ardayga, ayaa lagu tuuray asalka sababta oo ah Tareenka Xawaaraha Sare ku socda oo uu muwaadinku qasab ku ahaa [More ...]
Ku dar duruus cusub oo loo maro Island Express 3
3 joogsi cusub ayaa lagu daray Ada Express: Tareenka Xawaaraha Sare laguma qaban karin wax ka badan laba sano, iyo badhtamaha 2014, waxay bilaabatay inay ka shaqeyso khadadka Pendik, Gebze, Izmit, Sapanca iyo Arifiye. [More ...]
Tareenka xamuulka qaada oo lagu afduubay 3 (Video - Photo Gallery)
Jasiiradda Island Express waxaa ku dhacay tareenka xamuulka xNUMX oo dhaawacmay: Pendik - Ololiye Arifiye wuxuu ku qarxay Sapanca isku dhacay tareenka xamuulka. Shilalka shilalka ee mashiinka 3 iyo rakaabka 1 ayaa ku dhaawacmay Sida xogta lagu helay, [More ...]
Degmada Sapanca oo Dhamaystirtay Dhibaatada Jidadka Tareenka Kurtkoy
Degmada Sapanca Kurtköy Tareenka dhulka hoostiisa ayaa dhameystirtay dhibaatada: Kurtköy howsha shaqo ee Duqa Magaalada Sapanca Assoc. Dr. Aydin Yilmazer, ayaa sheegtay in dhibaato aad u muhiim ah la xaliyay. Dawlada Hoose ee Sapanca, [More ...]